देउवाको अर्को चलाखीले पौडेललाई सास्ती ! « Ok Janata Newsportal
देउवाको अर्को चलाखीले पौडेललाई सास्ती !
काठमाडौं । मुलुकको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि हलचल पैदा भएको छ । कांग्रेसको संस्थापन र इत्तर पक्ष पनि बेलाबखत पैठोजोरी गरिरहेको हुन्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादु देउवाको एकलौटी निर्णयले आजित बनेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष अहिले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरिरहेको छ । सभापति देउवा सरकारका गतिविधिसँग अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको पौडेल पक्षको दाबी छ ।
यतिबेला कांग्रेसको महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेर गएको छ । फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन विभिन्न कारण देखाउँदै सारिएको छ । पार्टीभित्रको चरम असन्तुष्टिका बीच महाधिवेशन गर्ने पक्षमा सभापति देउवा थिएनन् पनि ।
कांग्रेस इत्तर पक्ष महाधिवेशन गनुपर्ने भन्दै देउवालाई घच्घच्याइ राखेको छ । तर, सभापति देउवा महाधिवेशनका लागि उदार देखिदैनन् । पछिल्लो समय सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिमा सभापति देउवाले सिफारिस गरेका धेरै पदाधिकारी समेटिएका छन् । यसले गर्दा सभापति देउवा एकल ढंगले अगाडि बढेको पौडेल पक्षको दाबी छ ।
नेकपाको विवादका कारण कांग्रेसलाई थप बल मिलेको छ । तर, आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण कांग्रेसलाई कमजोर पार्दै लगेको छ । यतिबेला कांग्रेसले नेकपाको हरेक निर्णयमा मौन समर्थन जनाएको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिदेखि मध्यावधि निर्वाचनसम्ममा कांग्रेस मौन छ ।